Apple yakatumira maPads akawanda kupfuura Samsung neAmazon pamwechete | IPhone nhau
Apple yakatumira maPads akawanda kupfuura Samsung neAmazon zvakabatana
Ignacio Sala | 02/08/2021 20:00 | iPad, Noticias
Iyo iPad ndiyo yakanakisa piritsi iyo yatinogona kuwana parizvino pamusika, piritsi rinowanikwa mukati nhamba yakakura yeshanduro yemahomwe ese uye zvinodiwa yevashandisi, kuwanikwa kwatisingakwanise kuwana mune chero mumwe mugadziri.
Maererano nesigniniti IDC, panguva yetemu yekupedzisira, Apple yakatumira mamirioni 12.9 ePads (Models hadzina kuputswa). Kana tichienzanisa nemifananidzo yemahwendefa ayo Samsung neAmazon zvakatumira kumusika, tinoona kuti huwandu hwese zviri zviviri haupfuure huwandu hweyuniti dzakatumirwa neApple, dzakamira pamamirioni gumi nemaviri emamiriyoni.
Kunyangwe paine chokwadi chekuti Apple anga ari iye mugadziri akatumira mahwendefa mazhinji mukota yekupedzisira, yanga isiri iyo yakura zvakanyanya. Nepo Samsung neAmazon vakasangana nekukura muhuwandu hwekutumirwa kwe13.3% uye 20.3% zvichiteerana, kuwedzera kwaApple zvichienzaniswa negore rapfuura kwave kuri 3,5%.
Iyo inogadzira inokurumidza kugadzira Lenovo yave iri nhamba yemapiritsi anotumirwa. Huawei inovhara kupatsanura ne53,7% kudzikira kwehuwandu hwekutumirwa uchienzaniswa negore rapfuura.
Zvinoenderana neIDC dhata, parizvino Apple inotonga pamusika ine mugove we31,9%, inoteverwa neSamsung ine 19,6%. Panzvimbo yechitatu Lenovo ine 11,6% mugove, ichiteverwa neAmazon ine 10,7% chikamu chemusika uye Huawei ine 5.1%. Iyo yakasara 21% mugove unogovaniswa nevadiki vagadziri.
Mahwendefa anga ari mamwe emagetsi zvigadzirwa izvo kuwedzera kukura kunoitika muna 2020 nekuda kwedenda, pamwe nemaChannelbook kukodzera kwavo kwezvidzidzo. Zvinotarisirwa kuti huwandu hukuru uhu hunosara mukati memwedzi inotevera kusvikira coronavirus yatibvumidza kudzokera kuhupenyu hwekare (kana zvichibvira).
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » Apple yakatumira maPads akawanda kupfuura Samsung neAmazon zvakabatana
Apple inotarisa kuita yakawanda nzvimbo ye iPhone mabhatiri
Iyo "Tinder yemishonga inorwisa majekiseni" inodzingwa kubva kuApp Store